Doorashadii Dalka oo Sannad laga Joogo - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Doorashadii Dalka oo Sannad laga Joogo
La daabacay måndag 19 september 2011 kl 14.00
Sannad ayaa maanta ka soo wareegtay kolkii ay dhacday doorashadii dalka ee ugu dambeeysay 19-kii bishii septeembar ee sannadkii 2010. Iyadoona muddadii lagu jiray sannadkaa ey dalka ka dhaceen dhacdooyin fara badan.
Sannadka ayaa ahaa sannadkii uu xisbiga Sverigedimoqoraadigu (Sd) ka mid noqday xisbiyada xubnaha ku leg baarlamanka. Sidoo kale inkastey dhammaan xisbiyadu sheegeen inaaney wax wada shaqayn ah la yeelan doonin xisbigaa uu haddanna xisbiga Sd saameeyn ku yeeshay howlaha baarlamanka, sida ay sheegtay Inger Arenander oo ka howl-gasha idaacadda wararka Ekot qaybteeda wararka gudaha:
- Xitaa haddii aaney xisbiyada kale si toos ah wada-shaqayn ula lahayn xisbiga Sd, waxey haddana isku dayaan sidii ey ku ogaan lahaayeen mowqifka xisbiga. Iyo iney fikirkooda u soo ban-dhigaan mid uu xisbiga Sd taageeri kari lahaa eyna aqlabiyad ugu yeelan lahaayeen baarlamanka.
Hase yeeshee waxaan marnaba dhicin wada-hadalo toos ah ee garabyada Bidix iyo Midig la yeesheen xisbiga Sd.
Doorashadii dabadeed, kolkii ay cadaatay in garabka doorashada ku guuleeystay aannu aqlabiyad ku helin baarlamanka ayuu Fredrik Reinfeldt, madaxa dawladdi sheegay inuu codka ka raadsan doono baarlamanka iyo marka ugu horeeysa xisbiga Doogga.
Iyadoona wada-shaqeeyntaa aanay wax-badan ka suurtagelin. Siyaasadda difaaca iyo dibadda, sida Afgaanistaan iyo Liibiya ayay dawladdu wada-shaqayn ballaarana ku heshiiyeen xisbiyada Soosiyaaldimoqoraadiga iyo xisbiga Doogga. Midda ugu wayn ee dawladdu heshiiska ku kala saxiixdeen xisbiga Doogga ee siyaasadda gudaha waa siyaasadda la xiriirta Socdaalka. Middaasina u muuqan karto tallaabo lagaga takoorayay xisbiga Sd saameeyn uu ku yeesho siyaasaddiisa ugu muhiimsan, sida ay sheegtay Inger Arenander:
- Waxey dawladdu heshiis ku wada gaareen xisbiga Doogga uuna middaasi aqlabiyad uu baarlamanku ku leeyahay marka laga hadlayo siyaasadda socdaalka iyo soo-galootiga. Waxa ay macnaheedu tahay in aannu xisbiga Sd wax saameeyn ah middaa ku yeelan karin. Iyada oo sidaasi tahay ayyuu xisbiga Sd haddana la oran karaa inuu saameeyn ku yeeshay siyaasadda iyagoona xubno ku yeeshay baarlamanka una muuqda xisbi la aqbalay.